Ongorora kudzoreredza kwemurazvo wemhangura t pombi yekumisikidza pamwe negenering brazing.
DW-HF-25kw yakakwirira frequency induction kupisa muchina
• Copper main tube - 1.13 ”(28.7 0mm) OD 1.01” (25.65 mm) ID
Riser chubhu mhangura - 0.84 "(21.33 0mm) OD, 0.76" (19.30 0mm) ID
Simba pamoko rakaderedzwa kubva pakuburitsa max kwe10kW kusvika ku15kW kupa kunyange kupisa kwekuparidzira paungano pamwe neiyo yakagadziridzwa bvunzo coil.
ONA: Kupisa nguva inogona kuvandudzwa netsika coil dhizaini.
Vanenge 704 ° C (1300 ° F)
Machubhu emhangura akacheneswa uye akaunganidzwa. Iwo maviri preformed alloy mhete akagadzirwa kubva kune anowanikwa alloy mu lab yekuratidzira. Iyo tambo yakashandiswa yakayerwa 0.787mm (0.031 ”) muhupamhi Zvese zvinosimudza hwaro hwemhangura machubhu aive akatangira-kubuda nechena braze flux. Gungano rakaiswa mucoil yekuyedza pavhidhiyo kurira uye chiwanikwa chakayerera kuita mubatanidzwa pa "T" interface mumakumi matatu emasekondi.
Iyo yekudziya kupisa nguva yekushoma T yekubatanidza musangano ndeye makumi maviri nemasekondi
. Tichishandisa co-test test coil, takakwanisa kuburitsa raini muchikamu chechimiro chematabhubhu (mhangura) mumasekondi makumi matatu.
Categories Technologies Tags kusungurudza bhuni yendarira, high frequency brazing, high frequency brazing copper pipe, high frequency induction brazing, kuburitsa kusungurudza, kuburitsa kusungurudza mhangura, kuburitsa kusungurudza mhangura pipe, induction heat Post navigation